Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ - APP နှင့်အတူကောင်းမွန်သောကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစကူတာ
ထိုအရပ်၌များစွာသောလိုင်စင်မဲ့ hoverboards စျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်ထွက်ရှိပါတယ်, သင်ကသင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးတွေကိုအဘို့အစီးလုံခြုံရာတစျခုရှိပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့။ လူတစ်ဦးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့သကဲ့သို့ဤသူတို့သ hoverboards ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်ပုံစံအတွက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ hoverboard segway အတွင်းစပီအပြင်ပန်းဖုံးလွှမ်း fible ကာဗွန်ှုနေကြသည်။ သင့်ရဲ့လိုအပ် hoverboard Get Self-ဟန်ချက်ညီလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမားသောရှေးခယျြမှုကနေအမိန့်ဖြင့်သင့်အိမ်တံခါးမှာ Koowheel E1 ရိုးရာလျှပ်စစ် Scooter ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်။
ပထမဦးစွာပြုလုပ် Koowheel နေဖြင့်မူပိုင်ခွင့်ဆန်းသစ်ဖက်ရှင်အေးမြဒီဇိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒုတိယအ, ကသင့်ရဲ့နေ့စဉ်ခရီးစဉ်ပြောင်းလဲမှု setting များကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မျှဝေဖို့အခမဲ့ APP ကိုရှိပါတယ်။
တတိယ display screen သို့လုံးဝဘက်ထရီနှင့်မြန်နှုန်းကိုပြသ LED ။ ဤအင်္ဂါရပ်အားလုံးလေးတွေနှင့်လူကြီးများအဘို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်ဖြစ်ကောင်းစဉ်အမြဲငါတွေ့ရှိခဲ့နှင့်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ထိုသို့သင့်လျော်သောအံ့သြဖွယ် features တွေနှင့်အတူကြွလာကြပြီအကြီးမြတ်ဆုံး hoverboards ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျနော်တို့အထိရောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များပူဇော်ဖို့ hoverboards ဆန်းစစ်ပါတယ်။
အများစုမှာ Mini ကို Segway hoverboards အမျိုးမျိုးသောအမြန်နှုန်းနှင့်အလေးချိန်ရှိသည်။ အဆိုပါအရှိန်အဟုန်နှင့် ပတ်သက်. စကားပြောသောနှင့် hoverboard ၏ကွဲပြားခြားနား, ဒီတစ်ခု 22km / h တစ် max ကိုမြန်နှုန်းတွေ့ရမယ်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်မှာ 80-100kg အလေးချိန် load လိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယခုအပိုပျော်စရာနှင့်အများ၏နိဒါန်းနှင့်အတူစွယ်စုံဖြစ်လာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ခွင်ညှိဆိုင်ကယ်/ hoverboards ။ သိကြ-ဘယ်လိုဘဝပုံစံတိုးတက်အောင်စီခြေလှမ်းနှင့်အတူကမ္ဘာ၏တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကရှုထောင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ပိုပြီးရွေးချယ်စရာပေးခြင်းရဲ့လူသား၏အန္တိမမိတျဆှေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတွင် ကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်း Scooter ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို web site ကိုကျနော်တို့အားကိုးဖြစ်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးကောင်းပျဉ်ပြားကိုပူဇော်စေခြင်းငှါ, သောဤရောင်းချသူပြန်လည်သုံးသပ်တယ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်အဆိုပါ protected ဖက်ရှင်တွေစျေးကွက်အပေါ်ကိုထပ်မရရှိနိုင်ပါလာမယ့်နေကြသည်။ ဖွင့်, ဒါမှမဟုတ် reverse ပြန်ရွှေ့ဖို့လက်ဝဲသို့မဟုတ်သင့်လျော်ဖို့ Shift ။ ဆိုင်ကယ်လေးတွေ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်အထူးသဖြင့်လူတစ်ဦးဂုဏ်သတ္တိများဖြင့်ရောင်းချခဲ့သညျ။ သို့သျောလညျးအကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေးထဲကနေ, အခြို့ရွေးချယ်စရာတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့လိုမှအထောက်အကူဖြစ်စေပေမယ့်၎င်းတို့အားလုံးကိုဖြစ်နိုင်သည်။ မဆိုထက်နိမ့်နှင့်ဝယ်ယူသတိထားဖို့ - သငျလည်းသံပုရာဝယ်ယူမှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ NEW Update ကို: ဈေးပေါပေါလုပ် Koowheel knockoffs ဝယ်ယူသတိထားပါ! အချို့ဆိုင်ကယ်တစ်အမွှာ balancing စနစ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့်သင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသေချာစေရန်ကြိုးပမ်းသွားရမည်အကြောင်း, သင်ပင်ထပ်မံသင့်ရဲ့လုံခြုံရေးသေချာစေရန်ချင်ပေလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုခေတ်သစ် Vibe ကင်းမဲ့ကြောင်းခံစားရလျှင်သင်အလွယ်တကူကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ခွင်ညှိဆိုင်ကယ်၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ သင်ပင်သင်ရိုးရှင်းစွာအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်ခြမ်းရန်သွန်သင်ခြင်းကိုဖြစ်ရပ်အတွက်တကယ့်အလွန်အကျွံမြန်နှုန်းမှာထောင့်ကျွမ်းကျင်ပေမည်။